१ आश्विन २०७८, शुक्रबार ०८:१५
प्रचण्डको मनोबल गिरेको ओलीको दाबी
१ असोज, २०७८ काठमाडौँ : एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्ना पूर्वसहकर्मी माधव नेपालप्रति अमर्यादित अभिव्यक्ति दिएका छन् । ओलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई फोहोरको झिँगासँग तुलना गरेका छन् । एमाले काठमाडौंद्वारा बिहीबार आयोजित जिल्ला कार्यकर्ता भेलामा ओलीले एमालेलाई मौरी र नेपाललाई झिँगासँग तुलना गरेका हुन् ।
ओलीले प्रचण्डको मनोबल गिरेको दाबी गर्दै माओवादी केन्द्रमा कसैको भविष्य सुरक्षित नरहेको बताए । माओवादी केन्द्र समाप्तिको दिशामा लागेकैले प्रचण्डबाट असन्तुलित सम्बोधन आउन थालेको उनको दाबी थियो । ‘अचेल भनेको सुन्न थाल्नुभयो होला नि– दुई वर्षपछि त म एक्लै हुन्छु कि क्या हो ! सुनिहाल्नुभो होला– होइन हामीलाई त अब वडा जित्न पनि गाह्रो छ कि क्या हो !’ प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्तिमाथि ओलीको टिप्पणी थियो, ‘यो पार्टी अब काम लाग्दैन, विघटन गर्दिए हुन्छ भनेको पनि सुन्न थाल्नुभो होला ! ४९ जना नै मन्त्री हुन मात्र खोज्छन्, म त हैरान परेँ भन्दै टाउको समाएको पनि देख्नुभो होला नि ! त्यसकारण मान्छेहरूको मनोबल अब टुटिसकेको छ ।’ (पत्रपत्रिकाबाट)